Isitudiyo sendawo yaphansi eduze ne-Breon Airport w/Balcony-Patio - I-Airbnb
Isitudiyo sendawo yaphansi eduze ne-Breon Airport w/Balcony-Patio
Siyakwamukela ku-Gallatin Valley! Sitholakala emaminithini ambalwa ukusuka e-Bozeman Yellowstone International Airport, kanye namabhulokhi ukusuka edolobheni elihle laseBelgrade. Indawo yethu iyindawo ekahle yokuphumula phakathi nohambo lwakho. Eduze kukhona ukudla okumangalisayo, izindawo zokuphuza utshwala zendawo, ukuyothenga, ukudoba izindiza, ukuhamba ngezinyawo, ukushushuluza, ukuhamba ngeqhwa, iziphethu ezishisayo, ukugibela amahhashi, izilwane zasendle, amapaki esifunda kanye nezwe, nabo bonke ubuhle obunikezwa yi-Montana.
Sisondelene kakhulu nesikhumulo sezindiza Empeleni ngihambe ukuze ngithole indiza. Ngiye ngahlala lapha ukuphila kwami konke futhi angiqapheli umsindo wendiza. Sicela ukhumbule ukuthi izindiza ziqala cishe ngo-530am. Uma ungumuntu olala kancane khona-ke lena akuyona indawo yokuhlala.
Izivakashi zingena endaweni yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela, ziphakamise izitebhisi ohlangothini olungaphambili lwekhaya lethu elihlala abantu ababili. Ukujabulela ubulula bokungena kwekhiphedi efulethini lakho le-Studio Phezulu.
Ukuze kube lula kuwe, isiqandisi esincane, umshini wekhofi we-Keurig onezinhlobonhlobo zekhofi, kanye ne-toaster yosayizi ophakathi itholakala egumbini. Izingilazi nezinkezo nazo zitholakala egumbini. Ungakhohlwa nge-BBQ ngaphandle kwe-Deck ebheke igceke lethu elingemuva. Akukho UKUBHEMA noma ukushaya ENDLINI. Sicela uhloniphe ukuthi ubhukha indawo yokuhlala engabhemi futhi ubhema emgwaqweni.
Ukupaka emgwaqeni wethu wemoto kuyatholakala ngemoto eyi-1. Ukupaka okwengeziwe kuyatholakala emgwaqweni.
Uma udinga ukudlala kwephakethe lezinsana sazise ngesikhathi sokubhukha.
Umbhede omkhulu unethezekile.
Umndeni wethu uphila isikhathi esigcwele ezansi kwekhaya, kodwa sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuthi kuthulekile phakathi nokuhlala kwakho!
Izindawo ezinhle ongazithola:
<1 imayela (3 imiz) ukuya e-Bozeman Yellowstone Int 'l Airport
1.5 amamayela (6 imiz) kuya ku-Interstate 90 Access
9 Miles (15 imiz) kuya e-Bozeman
Amamayela angu-9 (imizuzu engu-15) ukuya e-Bozeman Hot Springs
Amamayela angu-14 (36 imiz) Indawo yokushushuluza eqhweni ye-Bridger
Amamayela angu-15 (imizuzu engu-25) ukuya Emnyuziyamu
yase-Rockies Amamayela angu-22 (imizuzu engu-25) ukuya e-Montana Grizzly meet
Amamayela angu-27 (imizuzu engu-50) ukuya
e-Hyalite Reservoir 37 amamayela (1 hr) ukuya ku-Big Sky Ski Resort
Amamayela angu-42 (imizuzu engu-45) kuya
ku-Clarks Caverns 98 amamayela (1 hr 30 imiz) ukuya e-Yellowstone National Park
Izincwadi zezindawo ezithandwayo zasendaweni zisegumbini.
Sicela unganqikazi ukushayela ucingo, i-SMS noma i-imeyili nganoma yimiphi imibuzo ongaba nayo ngaphambi kokubhukha. Sifuna ukuthi ujabule futhi ukhululeke phakathi nokuhlala kwakho nathi.
Isiqandisi esiyi-Mini Fridge
4.97 · 298 okushiwo abanye
Indawo esihlala kuyo igxile emndenini. Cishe wonke umakhelwane unezingane futhi WONKE umakhelwane unezinja. Iningi labo linezinja ezimbili. Isikhathi esiningi kuthulekile. Isikhumulo sezindiza sibanga umsindo omkhulu.
Kusihlwa, mina nomkami, ingane kanye nami sithanda ukuhlala ngemuva kwegceke, sibuke indawo yezintaba futhi sibuke izindiza zifika zizofika.
Sihlala kule ndawo!